Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): Foreign Office Minister Hugo Swire has commented on the agreement between the Kachin Independence Organisation and the Burmese government.
Foreign Office Minister Hugo Swire has commented on the agreement between the Kachin Independence Organisation and the Burmese government.
at 6/09/2013 07:20:00 AM
OCHA.. ရဲ့ မေလကုန် ထုတ်ပြန်ချက်အရ တနှစ်အတွက် IDP ၈ သောင်းကို ကျွေးမွေးဖို့
လိုအပ်ငွေ ၅၀.၉ မီလျံဒေါ်လာ
လက်ခံရရှိငွေက ၁.၂ မီလျံဒေါ်လာ
အခု UK အစိုးရက 5.4 မီလျံဒေါ်လာ (၃.၅ မီလျံပေါင်)
နောက်ထပ် လိုနေမဲ့ ရံပုံငွေ = ၄၄ .၂ မီလျံဒေါ်လာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိုင်ဂျာယန်ဒေသမှာ မေလ တလလုံး ဆန်ဝေဖို့ အခက်အခဲရှိခဲ့တယ်။ ဇွန်လမှာ မဝေရသေးဘူး။
ကဲ... သိန်းစိန်အစိုးရ.... ဘာပြောအုံးမလဲ??
Foreign Office officials met with representatives from the Kachin diaspora in the UK on5June to discuss the latest developments. The UK is giving £3.5 million of humanitarian aid to people affected by the conflict in Kachin State.????????